Maitiro Akanakisa Ekuronga Zvakakodzera zveMagariro Midhiya Zvinyorwa | Martech Zone
Kuronga ako enhau midhiya kunofanirwa kuve chikamu chakakosha cheyako nzira yekushambadzira midhiya, uye pasina chikonzero kutaura, ine zvakawanda zvakanaka. Kunze kwekusafanirwa kufunga nezve kutumira pane akati wandei midhiya mapuratifomu kakawanda pazuva, iwe zvakare uchengetedze isingachinjike purogiramu, kuronga nguva-inonzwisisika zvemukati, uye uve nehutano kugovana-ratio sezvo uchigona kuronga zvisati zvaitika.
Panzvimbo pekuve pane vezvenhau mapuratifomu nguva dzese zuva nezuva, kuronga kunokuchengetedza nguva yakakosha yaunogona kushandisa mukukudza bhizinesi rako. Kana iwe usingazive pekutangira, isu tinokupa iwe yakanakisa maitiro ekuronga kwakaringana ako enhau midhiya.
Tumira paNguva Dzakakwana
Nekuda kweanogara achichinja algorithms pane akasiyana masocial media mapuratifomu, kutumira panguva dzakakwana pane ako enhau midhiya maakaunzi kwakakosha kana iwe uchida kuti zvako zvinyorwa zvionekwe nevanhu vazhinji sezvinobvira. Nehuwandu hwevashandisi venhau vanowanda zuva nezuva, maficha enhau enhau 'feeds enhau haana kumbofamba nekukurumidza.
Iyo njere uye analytics ndeimwe nzira yekuti iwe uone kuti inguvai dzakanyanya kunaka. Ingo tarisa kana vateereri vako vachinyanya kushandira online uye kutumira panguva idzodzo. Izvo zvataurwa, kana iwe uchida kuve neakanyanya kujekesa nzwisiso, unogona kushandisa social media kuronga chombo. Aya marudzi ezvishandiso anokupa iwe akakwana kutumira nguva nguva imwe neimwe sezvo ivo vachishandisa algorithm kuti vaone yakanakisa nguva.
Kurwira kuti urambe uchienderana nekutonga kanopfuura kamwe nhoroondo yemagariro enhau? Tarisa uone iri rakazara gwara pa maitiro ekugadzirisa akawanda masocial media maakaunzi uye ona kuti ndeapi maitiro akanakisa.
Gadziridza Yako Kutumira Frequency - Ziva Kakawanda Sei Kuti Utumire
"Ndinofanira kutumira kangani paakaundi yangu yeFacebook / Twitter / Instagram?" ndeimwe yemibvunzo inowanzo bvunzwa kana zvasvika pasocial media zvemukati zano. Nehurombo, hapana iyo yegoridhe nhamba iyo inoshanda kune chero yemagariro midhiya chikuva. Mushure mezvose, chikuva chega chega chinoshanda zvakasiyana, asi vateereri vese vakasiyanawo, saka vanozove nezvinodiwa zvakasiyana uye zvavanotarisira.
Chinhu chimwe ndechechokwadi - kutumira kakawanda hazvingawedzere kusvika kwako kana kukura vateereri vako nekukurumidza. Pane zvinopesana, account yako inogona kusangana ne spammy, saka unogona kurasikirwa nevangangove vateveri.
Imwe nzira yekuziva kuti kangani maunofanira kutumira pane yega yega yemagariro midhiya chikuva iri kuburikidza nekuyedza. Muvhuro, ngatiti, iwe unogona kutumira imwe posvo. Zvino neChipiri wedzera nhamba kusvika kuzvikamu zviviri, neChitatu kusvika kumatatu, zvichingodaro. Vhiki rinotevera tarisa zvaunonzwisisa kana analytics uye enzanisa.
Pane nzira iri nyore kwazvo yekuziva kuti ndeipi nhamba chaiyo, uye izvo zvinogona zvakare kuitwa kuburikidza nesocial media kuronga chishandiso. Izvi zviri kutaurwa, ngatipe iwe mamwe mazano kana zvasvika kune yako yekutumira frequency.
Facebook, 1 - 2 nguva pazuva.
Twitter, 3 - 5+ nguva pazuva.
Instagram, 1 - 2 nguva pazuva.
LinkedIn, ka2 pazuva.
Pinterest - 5+ nguva pazuva.
Google+, 1- 3 nguva pazuva.
Set Up Kutumira Chirongwa cheYevergreen Zvinyorwa
Kugara uripo pasocial media hakusi nyore feat; mushure mezvose, iwe unofanirwa kuenderera nekupa zvirimo kune vateveri vako pane akasiyana mapuratifomu. Nekudaro, izvi hazvireve kuti yega yega posvo inofanira kuburitswa kamwe chete. Pane kupesana, zvimwe zvinyore zvinogara zvichikosha pamusoro penguva refu yenguva zvichingogara zvichingofadza vateereri vako. Kudzorerazve zvakasvibira zvemukati inzira yakanaka yekupa vateereri vako zvavanoda uku uchipa kukosha kune yako yemukati yekutengesa zano. Nekudaro, iwe unoziva sei kuti ndeapi machira anogara ari egreen uye kangani iwe aunofanira kuzvidzorera zvakare?
Zvigaro zvegreen zvinofungidzirwa kuti ndezvimwe izvo zvisingatarisi nguva uye zvinopa kukosha kwenguva yakareba. Imwe nzira yekuziva kuti ndezvipi zvezvinyorwa zvako zvinogara zviri zvegreen ndeyekuzvitsvaga nemaoko pane feed yako zvinoenderana nezviri mukati uye huwandu hweanofarira uye makomendi Wobva waita manyore kuronga yega yega yega uchitsvaga yakanakisa kutumira nguva.
Imwe nzira ndeye, iwe wakazvifungidzira, uchishandisa chishandiso chekuronga. Zvimwe zvezvishandiso izvi hazvigone chete kukubatsira iwe kuwana iwo mapostori ayo anonyanya kufarira, makomendi, uye masheya, asi zvakare kuronga iwo panguva dzakakwana dzekutumira pane dzakawanda nhoroondo dzezvemagariro enhau.
Shandisa Zvemagariro Media Kuronga Zvishandiso
Patakataura zvekutumira panguva dzakakwana, tichigadzirisa nguva yako yekutumira, pamwe nekurongedza zvemukati zvegreen, isu takataura kuti nekushandisa zvemagariro midhiya kuronga maturusi waisazongoshanda chete, asi iwe uchachengetedza yakakosha nguva futi. Pane zvakawanda zvakasiyana zvemagariro midhiya kuronga zvishandiso zvekusarudza kubva, zvisinei, vazhinji vanopa zvakafanana zvakafanana maficha. Yokutanga ndeye, zviri pachena kuronga zvako zvemapositi kwete chete pane imwe chete asi pane dzakawanda zvemagariro enhau maakaunzi. Yechipiri ndiyo yakanyanya-inodiwa analytics iyo inogona kukushandira iwe kuti uzive vateereri vako uye nekuvandudza yako yemukati zano.
Muzuva rino uye zera, rinenge risina bhizimusi remazuva ano rinogona kushanda pasina kuvapo pane imwechete, kana isiri yemamwe mapuratifomu enhau. Ichi chikonzero nei kuronga kwakanyanya-kukosha kana iwe uchida kuve nenguva yekuita zvimwe zvinhu kuti ukure bhizinesi rako pane kuve uri pafoni yako uchitumira nguva dzese. Naizvozvo, sarudza chishandiso chekuronga senge Amplifr uye tarisa kuti hupenyu hwako hunoita nyore sei bhizinesi rako parinokura!
Saina Up Kune Amplifr
Tags: amplifrnguva yakanakisazvinogara zvakasvibirirakutumira frequencyzvakarongwa mbirupasocial media frequencysocial media kuronga
Nate ndiye muvambi we Amplifr, sevhisi inobatsira vanhu uye mabhizinesi nekurongedza otomatiki avo enhau, achivabatsira kuwana mari yakawanda. Neshure mukugadzirisa zvigadzirwa, kusimudzira bhizinesi, uye kukura kwepasirese, anovavarira kubatsira vanhu nemabhizinesi nekuvaratidza maitiro avanogona kuramba vachikura vateereri vavo zvinobatsira uye zvinobudirira.
Zuva ramai rine mufaro!
Iwe Chaizvoizvo Iwe Yemagariro Media Mubatsiri?